Roy Keane Oo Ku Booriyay Manchester United Inay Sameyso “saxiix Weyn” Xagaagan Iyo Xidigo Uu Magacaabay
HomeWararka Ciyaaraha MaantaRoy Keane oo ku booriyay Manchester United inay sameyso “saxiix weyn” Xagaagan iyo Xidigo uu Magacaabay
May 4, 2021 Wararka Ciyaaraha Maanta, Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga 0
Roy Keane ayaa ku booriyay kooxdiisii ​​hore ee Manchester United inay lacag badan ku qarash gareyso suuqa kala iibsiga xagaagan hadii ay doonayaan inay u tartamaan hanashada Premier League xilli ciyaareedka soo socda.
Waxaa jiray astaamo horumaro ah intii uu macalin u ahaa Ole Gunnar Solskjaer bilihii la soo dhaafay waxayna qarka u saaran yihiin inay ololaha ku dhammeeyaan kaalinta labaad , iyagoo ka dambeeya kooxda loo doortay horyaalka ee Manchester City.
Si kastaba ha noqotee, Red Devils kuma aysan guuleysan horyaalka tan iyo markii Sir Alex Ferguson uu ka tagay kooxda 2013, Keane ayaana aaminsan inay u baahan yihiin inay sheegaan hadafkooda dhabta ah ee ku aadan suuqa kala iibsiga, isagoo soo jeediyay dhowr xiddig oo Premier League ah oo ay tahay inay eegaan bartilmaameedka.
“Waxaan dib ugu laabanayaa shaqaalaynta United, xaqiiqdii horey ayaan usocdaa waxay ubaahan yihiin inay aadaan oo ay sameeyaan saxiix weyn hadii ay ahaan laheyd Harry Kane ama Jack Grealish Keane ayaa usheegay Sky Sports News .
“Waxay heystaan ​​ciyaartoy xariif ah waana ku raacsanahay sida iska cad inay jirto horumar. Talaabada xigta ee Man United waa mida ugu weyn uguna adag.
“Liverpool waxa ay aheyd mid cajiib ah sanadkii hore, Man City xilli ciyaareedkaan aad ayey u fiicneyd laakiin United weli wey yar tahay, waxa ka maqnaa tayadaas dhabta ah”.
United ayaa xagaagii la soo dhaafay ku qarashgareysay 75 milyan oo ginni saxiixyadooda, iyadoo ay xusid mudan tahay ciyaaryahanka khadka dhexe Donny van de Beek , si kastaba ha ahaatee xilli ciyaareedkii ka horreeyay, Red Devils ayaa in ka badan 200 milyan oo ginni ku qarashgareysay saxiixyo cusub, oo ay ku jiraan Harry Maguire , Bruno Fernandes iyo Aaron Wan- Bissaka .